SHEEKADII KUN HABEEN IYO HABEEN qeybtii 39aad. Safarkii sadaxaad ee Sindibaad iyoo Sheydaankii Madoobaa – Filimside.net
SHEEKADII KUN HABEEN IYO HABEEN qeybtii 39aad. Safarkii sadaxaad ee Sindibaad iyoo Sheydaankii Madoobaa
January 29, 2019 Cabdiraxmaan Anteeno
Taariikhda: January 29, 2019
Waxaan marka hore ka cudur daaranayaa hakadkii sheekada ku yimid mudo sadax maalmood ah maadaama aan arimo qoys ku mashquulsanaa.
Sheekada qeybtii hore waxay inoo mareysay markii uu sheydaankii madoobaa iska tagay anagana aan isugu imaanay shir si aan uga wada hadalno sidii aan nafteena ku badbaadsan laheyn.
Dadkii qaarkood ayaa talo ahaan u soo jeediyay inaan nafteena ku tuurno bada isla markaasna aan biyaha ku dhimano halkii anaga oo nool inta nala dubto oo bir af leh jirkeena la dhex mariyo nala cuni lahaa qaarkalana ay talo nooc kale ah soo jeediyeen.
Markaas ayaan dadkii ka dhex kacay waxaana u sheegay inaan hayo talo macquul ah oo aan ku badbaadi karno waxaana ku dhahay;
Waxay u badantahay inaan dhamaanteena jaziiradaan ku dhiman doono marka marba hadii aan dhimaneyno anagoon dagaalamin inaan dhimano ma fiicna sidaas owgeed waxaan haayaa talo ah inaan geedahaan alwaaxyada ah ee meeshaan yaalo ka sameysano doon yar oo aan jaziiradaan kaga safarno, markii uu sheydaanka caawo yimaado oo mid naga mid ah cuno isla markaasna uu seexdo aan birtaan weyn inta dabka ku kululeyno aan indhaha ka galino si uusan markale noo arkin oo aan nafteena u badbaadsano.
Hadii ay taladaan guuleysato waxaa macquul ah inaan badbaadno hadii ay suurto gali weysana awalba dhimasho waa u soconay waana dadaalnay.
Taladii aan keenay ayaa loo guuxay waxaana la isku raacay inaan sidaas sameyno anagoo halkii ka bilownay howshii aan doonta ku dhiseyna waxaan aheyn kuwa aad u tiro badan sidaas owgeed isla maalinkii ayaa doontii dhisnay waxaana ku diyaarsanay xeebta agteeda lkn anagoon bixin ayuu sheydaankii madoobaa nagu soo gaaray wuxuuna naga baxsaday nin naga mid ah asigoo nool ayuuna inta dubtay cunay.
Markii uu seexday ayaan soo baxnay oo birtii afka laheyd inta kululeynay markii ay dhimbil noqotay sheydaankii isha ka gilinay, taasoo kaliftay in sheydaankii qeyliyo oo cabaado qeylo uu dhulka nala gariiray wuxuuna bilaabay inuu na raadiyo asigoo gacmahiisa adeegsanayay anagana waxaan aheyn kuwa dhinac uu soo aadaba ma ahee dhinaca kale u carara.
Markuu mid naga mid ah qabtaba wuxuu ahaa mid kala gooyo ilaa markii dambe uu qeyliyay qeylo aad u xoogan waxaana usoo gurmaday oo goobtii yimaaday 12 sheydaan kale oo asiga lamid ahaa oo sidiisa oo kale u weynaa.
Markii aan aragnay gurmadkii u yimid ayaan kala cararnay ayadoo inteena badan usoo carareen dhankii iyo doontii aan xeebta ku diyaarsanay waxaana bilownay inaan cararno hase yeeshee waa nalagu soo gaaray.
Sheydamadii ayaana markaas six un noo laayay waxayna gudo galay in ay dhagaxmaan waaweyn oo meesha yaalay nagu garaacaan ilaa ay asxaabteydii oo dhami dhamaadeem waxaana ka badbaaday kaliya aniga iyo mid safareydii kamid ahaa inteenii kale wey laayeen.
Markii aan badbaadnay ayaan soo baxnay sidii aan u soconay oo bada ugu gudo jirnay ayaan markii dambe imaanay jaziirad meel ku taalay waxaana ku daganay jaziiradii waa intaasoo ay dad ku nool yihiin sidoo kalana waxaan cuno ka halnaaye.
Hase yeeshee waxay noqotay jaziirad cidlo ah oo qofna uusan ku nooleyn, waxaan go’aansanay inaan habeenkaas halkaas seexano oo subaxii safarkeenii sii wadano.
Habeenkii markii saqdhex la gaaray ayaa waxaa noo yimid mas aad u weyn aadna u xoog badan oo hadaad weyninkiisa aragto la yaabeyso, wuxuuna maskii bilaabay inuu cuno saaxiibkey ila socday asigoo sidiisa ah ayuuna laqay.
Waxaan noqday mid cabsidii heysay kusii jibaarantay waayo maska marka uu saaxiibkey laqay waxaan maqlay qababac iyo qajajac ka yeererysay maska calooshiisa maadaama uu ahaa mid caloosha dhexdeeda ku jijibinayay maska sidii inuu ukun laqay oo kale ayuuna lafihii usoo tuuray.
Anigii waxaan dhex galay god dhagax ka sameysnaa oo meesha ku yaalay si aan aan nafteyda ugu badbaadsado waxaana habeenkii ku baryay godkii anigoo cabsida I heysaa ilaahay ogyahay.
Subaxii markii la gaaray ayaan doontii yareyd kusoo laabatay bada ayaana isku soo shubay waxaana go.aansaday in toogtaan hadiiba aan dhimanaayo bada ku dhex dhinto.
Wixii aan socdo oo doontii ila socotaba waxaan markii dambe la kulmay markab aad u weyn oo bada dhex socdo markaas ayaan inta farxay bilaabay inaan markabkii u gacan haatiyo waa intaasoo aan badbaado ka helaaye.
Sidii aan markabkii ugu dhawaanayay uguna gacan haatinayay ayay markii dambe I arkeen waxayna bilaabeen iney iisoo dhawaadaan si ay ii badbaadiyaan.
Alle ayaa mahad iska leh markabkii ayaa I badbaadiyay markii aan koray oo aan dadkii saarnaa la kulmay sidoo kalana markabkii sii fiiriyay ayay waxkasta waxay ila noqdeen sidii waxaan aqaano.
Waxaan u tagay markabkii kabtankii waday yaab badanaa mise waaba markabkii jaziirada iiga soo tagay ee badeecada ii saarneyd kaasoo aan soo fuulay safarkeygii labaad.
Haa waa xaqiiqo waa markabkii jaziiradii dheymanka iiga tagay anigoo hurda nasiib wanaag kabtankii ayaan is aqoonsanay waana is wareysanay markaas ayaan uga waramay sidey wax u dhaceen iyo wixii aan kala kulmay safarkeygii labaad iyo kii sadaxaadba.
Markii aan u waramay ayuu isna ii sheegay inuu in mudo ah i raadinayay oo badeecadiina wali markabkii saarantahay oo aan la taaban.
Waqtigaas aniga waxaan ahaa mid aan waxba heysan waayo hantidii iyo badeecadii aan watay ee markabka ii saarneyd waxay ku maanshowday bada oo waatii daayeerada naga dhaceen sidaas owgeed ayaan alaabteydii hore dib usoo ceshtay.
Kabtankii markabka ayaa markaas ii sheegay in ay u socdaan jaziirad la yiraahdo jaziiradii nabada isla markaasna badeeco badan wataan wuxuuna ii sheegay in hadii aan rabo badeecadeyda halkaas ku iibsan karo.
Aniga sidii ayaan yeelay waana soo baxnay ilaa aan jaziiradii ka imid waxaana halkii ku iibiyay badeecadii aan watay markii aan galay safarkeygii 2aad anigoo lacag badan kasoo macaashay.
Markii aan faa’iido badan soo helay ayaan go’aansaday inaan magaaladeydii dib ugu laabto waxaana kusoo laabtay magaaladii aan jeclaa ee Baqdaad anigoo halkii sal dhigtay.
Safarkii 4aad ee badmaaxii Sindibaad iyo markii Sindibaad nolosha lagu duugay….
La soco qeybta 40aad.
Fadlan walaal xayaysiimaha webka saran midkasta halmar Click ku sii adigoo mahadsan.
Waxaa Aqrisay 1,424